Ahoana no andraisana andraikitra amin'ny zavatra ataonao sy ny fiainanao: 11 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t! - Blog
Ahoana no andraisana andraikitra amin'ny asanao sy ny fiainanao
Fantatsika rehetra ny mety hitrangan'ny fiainana mampiady saina, ary ny fahamaimaizan'ny zavatra kely… tsy voafehy! Mora be izany manome tsiny olona hafa , na ny toe-javatra manodidina anao.
Ny fampiakarana sy fandraisana andraikitra amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra hataonao - ary iray amin'ireo tsara indrindra.
Rehefa manana ny zava-mitranga amin'ny fiainanao ianao dia afaka manomboka mamolavola ny ho avinao.
Inona no dikan'ny hoe mandray andraikitra amin'ny hetsika ataonao?
Raha ny tena izy dia midika hoe manaiky ny anjara asanao amin'ny fiainanao ianao - ny sombin-javatra tsara SY ny sombintsombiny ratsy.
Raha tokony hitady olona na zavatra hafa omena tsiny ianao dia tsy maintsy ekenao fa tompon'andraikitra amin'izay mitranga ianao.
Azo antoka fa misy fiantraikany amin'ny olon-kafa sy ny anton-javatra hafa, saingy tompon'andraikitra amin'ny hetsika ataonao sy izay zavatra mitranga ao anatin'ny fetran'ny fehezinao ianao.
Midika izany miala tsiny rehefa nahavita zavatra tsy mety , na farafaharatsiny miaiky hoe maninona ny olona mety manantena fialantsiny avy aminao!
Midika izany ny fanekena fa ny zavatra nataonao manokana dia mety nitarika anao tamin'ny toe-javatra iainanao izao, na tianao izany na tsia.
Ny vaovao tsara dia midika koa fa mankalaza ny tenanao rehefa manao zavatra tsara ianao. Tompony io fampisehoana mahatalanjona nataonao io tany am-piasana ary raiso ny andraikitrao ary omeo voninahitra ny asa mafy nataonao tao. Mirehareha amin'ny tenanao rehefa mahomby amin'ny zavatra iray ianao.
Ka tsy ny faharavana sy ny haizina daholo. Ny fanekena ny zavatra ataonao dia mety hidika koa amin'ny fanajana ny tenanao mendrika.
Isika rehetra dia efa nandre teny nalaina isan-karazany momba ny maha tompon'andraikitra amin'ny fahasambaranao manokana, ary misy fahamarinana marobe amin'izany.
Amin'ny alàlan'ny fanamafisana sy fanekena fa misy vokany ny zavatra ataonao, dia afaka mahita fomba hanaovana izany vokatra izany ianao.
Amin'ny fahatsapanao fa ianao no mitantana ny fiainanao manokana, dia ho hitanao fa mora kokoa ny manomboka mamorona - ary mitazona - ny fahasambaranao manokana.
Fa maninona no zava-dehibe ny fitakiana andraikitra?
Ny fandraisana andraikitra dia zava-dehibe amin'ny fifandraisana tsara amin'ny olona manodidina anao, ary koa amin'ny tenanao.
Ny mpiara-miasa, ohatra, dia tsy te hiara-miasa amin'ny olona tsy afaka mandray hevitra mahasoa . Tian'izy ireo ny hiara-miasa amin'ny olona mahatsapa ny fetrany ary koa ny tanjany ary tsy matahotra mamaly ny hevitry ny hafa ary manova zavatra raha ilaina izany.
aiza izy ireo izao no mpiady
Ny namana sy ny mpianakavy dia mazàna manome kamo be kokoa noho ny mpiara-miasa, fa tsy midika izany fa havelany handeha morontsiraka mandrakizay ianao.
Vonona izy ireo hamela zavatra vitsivitsy hikorisa, hamela anao hitombo ao aminao ary tsy handray andraikitra feno amin'ny zavatra rehetra amin'ny fotoana rehetra. Izany hoe, misy fetra!
Amin'ny fotoana iray, ny olon-tianao amin'ny fiainanao dia manantena anao hivoatra ary ho tompon'andraikitra.
famantarana fa misy bandy milalao aminao any am-piasana
Ny fifandraisana akaiky dia miasa mitovy - ny fitoviana dia zava-dehibe amin'ny fifandraisana rehetra, koa ny fanekena andraikitra dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ireo fatorana ireo.
Ahoana ny fomba hijanonana ny famerimberenana ireo hadisoana ireo hatrany hatrany
Fomba 11 hanombohana mandray andraikitra
Ankehitriny rehefa fantatrao fa zava-dehibe ho anao ny mandray andraikitra amin'ny hetsika ataonao sy ny fiainanao, ahoana no ahatanterahanao izany?
1. Atsaharo ny fanomezan-tsiny ny hafa
Ho an'ny iray, mankaleo haingana be izy io! Na ny olona mankafy anao aza dia ho leo aminao fa manome tsiny ny hafa hatrany noho ny zavatra azonao fehezina.
Faharoa, mandreraka anao. Ny fanovana ny tsiny no mahatonga anao hahatsapa shifty be dia be ny fotoana, sa tsy izany? Fantatsika matetika rehefa manosika ny tsiny amin'ny olon-kafa isika ary afaka mamela antsika izany mahatsiaro tena ho meloka SY notrohinao mbamin'ny faikany . Tsy ara-drariny amin'ny olon-kafa izay anomezanao tsiny zavatra, ary tsy ara-drariny koa aminao.
2. Atsaharo ny fanaovana fialantsiny
Tahaka ny fanomezana tsiny ny olon-kafa, ny fialan-tsiny dia mamela anao hanilika andraikitra amin'ny vokany.
Mazava ho azy fa misy zavatra tsy voafehinao, fa misy zavatra maro koa tsy voafehinao.
Mety taraiky ianao hihaona amin'ny namana hisakafo hariva. Raha tokony hisaona ny fifamoivoizana amin'ny dianao ianao, dia mariho fotsiny ary lazao fa tsy namela fotoana na anton-javatra ampy ianao tamin'ny fitohanana.
Ary mba tsy hialana tsiny amin'ny voalohany, mieritrereta fomba ahafahanao manangana drafitra mifanaraka amin'ny drafitrao.
Anontanio ny fomba ahafahanao miomana amin'ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny. Inona ny drafitra B anao? Inona no azonao atao mba tsy hanelingelenana ny hafa?
3. Atsaharo ny fimonomonona amin'ny toe-javatra misy anao
Azo antoka fa mety hitsentsitra amin'ny fomba sasany ny fiainanao, fa raha ny ataonao rehetra fotsiny dia ny miresaka momba ny habetsany mamono azy, tsy misy zavatra hiova firy.
Averina indray fa tsy eo ambany fahefanao ny zava-drehetra, fa amin'ny toerana anananao fanaraha-maso dia tokony ho vonona handray azy ianao.
Ny mimonomonona momba ny toe-javatra misy anao dia matetika mitovy amin'ny fanofahofana saina fotsy ary ny fanekena azy ho maharitra sy tsy azo tohaina.
Manana hery bebe kokoa noho ny tsapanao ianao.
4. Araho amin'ny teny fikasana sy fanoloran-tena
Nilaza ve ianao fa hanao zavatra?
Ataovy avy eo.
Meteza ho olona mahatoky amin'ny teniny ary misy dikany ny fampanantenany.
Azo antoka, raha misy zavatra manindry tonga, dia azonao atao ny manazava amin'ilay olona hafa hoe maninona ianao no tsy afaka manao an'izay nolazainao fa hataonao.
Saingy tokony ho vitsy sy lavitra ireo fotoana ireo ary ny antony mahatonga izany dia tokony ho tena izy sy manan-danja.
Midika izany fa tsy azonao atao ny manafoana ny drafi-pisakafoanana satria nanana andro goavambe tany am-piasana ianao. Tsy tokony ho mora tohina izao tontolo izao.
Ampahany amin'izany ny fahalalana rehefa tsy hanao fanoloran-tena mafy orina na fampanantenanao izay fantatrao fa tsy ho vitanao.
Metezista ary lazao fotsiny fa hanao zavatra ianao raha tena maniry na mikasa ny hanao izany.
5. Fantaro izay tena tadiavinao eo amin'ny fiainana
Ny ampahany lehibe amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fiainanao dia ny fahalalana ny fiainana tianao hotratrarina.
Azo antoka fa mety ho sarotra ny mamantatra izany indraindray, saingy dingana tokony hiezahanao hifikirana sy hamakivakiana impiry izay ilaina mba hamoronana tanjona mivaingana sy azo tanterahina amin'ny fiainanao izany.
6. Manaova hetsika
Raha vantany vao fantatrao izay tadiavinao amin'ny fiainana dia afaka manao zavatra izay hahatonga anao hanakaiky kokoa an'io fotoana io ianao.
Ireo teboka 3 voalohany etsy ambony - manome tsiny ny hafa, manao fialantsiny ary misaona ny toe-javatra misy anao - samy manana zavatra iraisana avokoa: tsy mila hetsika akory izy ireo.
Fa kosa, raha nanao zavatra ianao, tsy nahavita zavatra iray, na nisintona fotsiny tamin'ny fiainana, dia zava-dehibe daholo ny hetsikao manaraka.
Mila manarina lesoka ve ianao? Mila miala tsiny ve ianao fa tsy nanao zavatra? Ianao ve mila manamboatra làlana ary hanao zavatra hitombo amin'ny fiainana?
Ny fandraisana andraikitra dia lehibe amin'ny fandraisana ny andraikinao amin'ny fiainana.
7. Mamelà ny helokao rehefa misy zavatra tsy mety
Tsy tonga lafatra ianao ary hanao fahadisoana.
Na dia zava-dehibe aza ny fanananao ireo lesoka ireo, dia mitovy ihany koa amin'ny zava-dehibe izany mamelà ny tenanao ho azy ireo.
inona no nanjo an'i matt hardy
Tsy misy olona tsy mety diso - manao fahadisoana daholo isika rehetra. Fa ny fiatrehana azy ireo ara-pientanam-po dia zava-dehibe.
Malemy fanahy amin'ny tenanao ary fantaro fa ny lesoka dia tsy mahatonga anao ho olona ratsy. Raha ny marina, ny lesoka dia lesona mahatonga anao ho olona tsara kokoa mandroso - RAHA mianatra avy amin'izany ianao.
8. Araraoty ny fahazaran-dratsy
Fantaro fa ny fisorohana andraikitra dia fahazarana betsaka toy ny fanapahan-kevitra raisina. Fomba fisainana noforoninao sy nohamafisinao tamin'ny alàlan'ny fanatanterahana famerimberenana.
Izany dia mety hiteraka fanosehana tsy nahy ireo olona tianao. Mety hanome tsiny tsy nahy amin'ny olon-tianao ianao satria zatra manilika andraikitra. Tena manimba ny fifandraisana eo amin'ny fiainanao izany.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny shirk andraikitra kely tsirairay dia manangana ary mety hiteraka olana any aoriana.
Saingy, ny fanapahana ny fahazarana dia manomboka amin'ny famantarana sy fanekena izany amin'ny maha-izy azy. Raha vantany vao manao an'io ianao dia ho tonga saina bebe kokoa - hahatsapa bebe kokoa - amin'ny fotoana anaovanao azy. Ary izany dia manome anao ny hery hijanonana alohan'ny hisintomanao izany bika (na saina) izany.
9. Ataovy anaty taratasy
Mety hanampy raha manomboka manoratra zavatra ianao.
Ny eritreritsika sy ny fihetseham-pontsika dia mety hanjary misavoritaka sy be loatra, noho izany dia lasa tena sarotra ny manodina izay tena mitranga. Indraindray, tsy tsapantsika akory fa tsy mandray andraikitra amin'ny hetsika ataontsika isika satria tsy fantatsika tanteraka ny zava-mitranga.
Raha toa mahazatra izany dia tonga ny fotoana ahazoana dingana vaovao amin'ny toerany.
Soraty ny zavatra tsapanao momba ny hetsika na olona sasany. Ilay tetik'asa fiasa vondrona izay tsy nandeha nametraka drafitra? Soraty ilay anjara lalaovinao tao ary diniho, amin'ny zava-kendrena, ny fahaizanao nanao.
Raha afaka milaza marina ianao fa tsy nisy kilema ny fandraisanao anjara, tsara izany. Raha tsy izany, ary tena olombelona ianao (!), Diniho ny fomba nahafahanao nanampy bebe kokoa na lasa lavitra.
Amin'ny fahitana ireo hevitra ireo voasoratra dia ho tsapanao amin'ny toerana azo antoka anananao fa manana toerana hitombo ianao.
Ny fanehoan-kevitra manorina avy amin'ny hafa dia mety hahatsapa ho toy ny tehamaina amin'ny endriny, na izany aza fikasana tsara izany. Amin'ny fahitana ny zavatra hitanao momba anao, dia hahatsapa ho mahazo aina kokoa ianao amin'ny fanekena valiny ary hianaranao ny hanana ny fihetsikao.
10. Mitadiava mpanafika amin'ny fandavana anao
Inona avy ireo toe-javatra mety hitranga rehefa miala amin'ny andraikitrao ianao?
mahatsiaro tena ho tsy anisan'iza aho
Misy faritra amin'ny fiainanao ve izay matetika ianao no manome tsiny, fialan-tsiny, na himenomenona voalaza etsy ambony?
Raha azonao atao ny mamantatra ireo toe-javatra izay mandà tsy hampamoahina ianao amin'ny zavatra ataonao, dia afaka mahita fomba hieritreretana hafa momba azy ireo ianao.
Angamba misy olona tsy azonao ekena ny tsiny satria ny fanaovana izany dia mahatonga anao hahatsapa ho ambany sy tsy mahay.
Na inona izany na inona, ny fahafantarana hoe rahoviana, aiza ary nahoana ianao no mandà tsy handray andraikitra amin'ny fiainanao sy ny zavatra ataonao dia dingana iray lehibe amin'ny famahana io olana io.
11. Fantaro ny safidinao
Safidy feno ny fiainana. Fotoana kely rehefa afaka mandeha amin'ny lalana iray na amin'ny lalana hafa isika.
Safidy lehibe no lehibe. Ny hafa kely. Fa zava-dehibe ny fanekena fa nifidy ny fomba na ny fomba iray ianao.
Tsy mora ny mamantatra ny safidy ratsy nataonao. Tsy misy te hiaiky fa nisy safidy tsara kokoa izay tsy noraisin'izy ireo.
Fa ny fanekena fa ny safidy dia efa vita ary tsy azo amboarina dia mandeha lavitra tokoa amin'ny fandefasana azy.
Ary manana safidy eo alohanao izao. Azonao atao ny misafidy làlana iray izay afaka manampy amin'ny fanitsiana toe-javatra ratsy, na afaka misafidy làlana iray izay mitaky fandevenana ny lohanao amin'ny fasika sy fandavana andraikitra ianao.
Iza no hofidinao?
Fa maninona no tokony hataonao izany ary inona avy no tombony azo?
Amin'ny fanekena ny andraikitrao amin'ireo zavatra azonao fehezina dia hahatsapa ho tsara kokoa ianao amin'ny fiainanao amin'ny ankapobeny.
Ny fisorohana ny fandraisana andraikitra dia mety hahatonga antsika ho sosotra ary mihoatra ny fahatsapana ho meloka kely.
Amin'ny fanekena ny zavatra ataontsika dia afaka manaisotra ireo fahatsapana ratsy ireo isika. Azo antoka fa mety mbola malahelo ihany isika amin'ny fanekentsika fa tsy nanao ny tsara indrindra vitantsika isika, fa farafaharatsiny manana ambaratonga fahatsiarovan-tena isika ary te-hiasa amin'ny fanatsarana ny tenantsika.
Io fihetsika tsara io dia mavitrika ary hahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny lafiny hafa amin'ny fiainanao koa. Amin'ny fidirana amin'ny fahazarana tsara kokoa, dia hanana fomba fisainana tsara kokoa ianao.
Hahatsapa ho tsara amin'ny zavatra ianao ary hatoky tena kokoa amin'ny zavatra ataonao, izay mety hitarika vokatra tsara kokoa - toe-javatra mandresy!
Amin'ny maha tompon'andraikitra anao dia asehonao fa manaja ny tenanao sy ny hafa ianao. Tena afaka manatsara ny fifandraisanao any am-piasana izany, ary koa amin'ny fianakavianao, ny namanao ary ny mpiara-miasa aminao.
Handray soa be dia be ianao amin'ny fiakarana sy ny fanananao ny fihetsikao ary hahazo fanajana olona maro ianao eny an-dàlana.
Ka, inona marina no misakana anao?
Azo antoka fa mety hahatsapa ho mampatahotra sy mampatahotra izy amin'ny voalohany, saingy ho gaga ianao amin'ny hafainganan'ny fiovan'ny toe-tsainao sy ny fihetsikao.
Tsy milaza izahay fa mila miala tsiny tampoka amin'ny zava-drehetra ianao ary mahatsiaro ho meloka sy kivy tanteraka! Ekeo fotsiny fa olombelona ianao ary tsy ho tonga lafatra 'eo imasonao mihitsy.
ny fomba tsy clingy ao anaty fiarahana
Amin'ny fanekena ny zavatra ataonao sy ny fihetsikao dia afaka manomboka mamolavola ny fiainanao ho amin'ny tsara kokoa ianao. Ekeo ny tenanao amin'ny maha-ianao anao ary mitadiava fomba hahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa eny an-dàlana.
fa maninona no miverina foana ny mpifoka rongony
ohatra momba ny zava-misy mahafinaritra momba anao
ny fomba hitsaharana tsy hitiavako olona tsy tia anao
maninona ny olona sasany no tsy manana namana